लामो समय मास्क लगाउँदा मृत्युसम्मको खतरा ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/लामो समय मास्क लगाउँदा मृत्युसम्मको खतरा !
कोरोनाको महामारीले मानिसहरु संक्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्दछन् । तर कतिपय अवस्थामा त्यहि मास्कले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ ।
यदि तपाई पनि मास्कको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? लामो समय सम्मप्रयोग गर्नुहुन्छ भने सावधान ! यसले तपाईको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
लगातार लामो समयसम्म मास्क लगाउँदा शरीरमा अक्सिजनको कमी हुने गर्दछ । जसले रगतमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्न जान्छ । यति मात्र होइन, लामो समयसम्म मास्क लगाउँदा स्वास्थ्यमा अन्य कैंयौ प्रकारको समस्या निम्त्याउने गर्दछ ।
कोरोनाको महामारीबाट बच्न चिकित्सकहरु एन ९५ मास्क लगाउने सुझाव दिन्छन् । तर मास्क लगाउँदा लगातार लामो समयसम्म लगाउनु हुदैन । अझ दौडदाँ वा छिटोछिटो हिड्दा मास्क लगाउनु हानिकारक हुन्छ । यस्तो बेला मास्क खोल्नु पर्दछ । घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाएर मात्र निस्कनु होला । तर ध्यान रहोस् यो टाइट लगाउनु हुदैन ।
ओलीको अयोध्या तीरले मोदीको राजनीति डगमगायो
मलाई कोही मार्छु भनेर आयो भने पनि त्यो बाटोमा नै दुर्घटनामा परेर मर्छ : रवि लामिछाने